Maxey Warbaahinta Talyaaniga Ka Yiraahdeen Guushii Ay Xalay Juventus Ka Gaartay As Monaco? - Wargane News
Home Sports Maxey Warbaahinta Talyaaniga Ka Yiraahdeen Guushii Ay Xalay Juventus Ka Gaartay As...
Warbaahinta talyaaniga aad uma hadal qaadin guushii ay Juventus xalay ka gaartay dhigeeda As Monaco markaas kooxda ka dhisan Turin sida la aaminsan yahay hal lug la gashay final-ka ka dhici doona magaalada Cardiff horaanta bisha June ee soo aadan.
Juventus guul weyn ayey ku gaartay dalka faransiiska iyadoo labadaas gool kaga mahad celineysa Gonzalo Higuain sidoo kalana ku amaaneysa Dani Alves, kaliya labada wargeys ee Tuttosport iyo Corriere dello Sport.
Dhawr cinwaan ayuu wargeyska Corriere dello Sport ka sameeyay guushii ay xalay gaartay, iyadoo lagu soo daabacay cadadkii maanta.
Champions League Semi Final – Higuain oo guul kasoo hoyay Monaco (2-0) Boqorka Monaco.
Laba gool oo aan caadi aheyn kana timid Papita, kaas oo u jawaabay Ronaldo iyo Real
Halyeey Buffon oo Monaco garaacay
Final-ka Cardiff aad ayuu u dhaw yahay
Dhanka kale wargeyska kasoo baxa magaalada Turin ee Tuttosport ayaa sidoo kale dhawr cinwaan ka sameeyay guushii Juventus.
Higuain – Boqorka Monaco, Cardiff waa dhawdahay
Juventus waxey maamushay lugtii hore Champions League semi final-kiisa (2-0) laba gool oo ka timid Papita iyo lix kulan oo aan shabaqeeda la taaban.